Jentilisa - Wikipedia
Ny Jentilisa na Jentily dia ireo olona tsy Jiosy izay atao amin' ny ny teny hebreo hoe גוים / Goyim (na גוי / Goy raha tokana) na ireo olona tsy Kristiana fa mpanompo sampy ao amin' ny literatiora kristiana.
Avy amin' ny teny latina hoe gentilis io teny io, izay midika hoe "olon' ny vahoaka iray" na "olon' ny firenena iray", izay nisampana avy amin' ny teny hoe gens izay midika hoe "foko, vahoaka, fianakaviana".
Ny teny nogasina hoe jentilisa na jentily dia nampiasain' ny mpadika teny handikany ny teny hebreo hoe גוי‎ / goy sy ny hoe נכרי‎ / nokhri, izay hita ao amin' ny Baiboly hebreo, sy ny teny grika hoe ἔθνη / éthnē ao amin' ny Testamenta Vaovao. Ny teny fototra hoe goy sy ny hoe ethnos dia manondro ny "olona", ny "vahoaka" na ny "firenena" sady samy napiharina hanondroana ny Israelita sy ny tsy Israelita ao amin' ny Baiboly.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jentilisa&oldid=1001944"
Voaova farany tamin'ny 4 Martsa 2021 amin'ny 08:00 ity pejy ity.